टियु टपर गाउँपालिका अध्यक्ष, विकासमा आफ्नो गाउँपालिकालाई ‘नेपाल टप’ बनाउने अभियानमा – Everest Times News
रत्नराज्य क्याम्पस, प्रदर्शनीमार्गमा २०५६ बाट नेपाल विद्यार्थी संघका इकाई सभापति थिए भुपेन्द्र राई । अनेरस्ववियुको दबदबा रहेको क्याम्पसमा नेविसंघले साधारण सदस्यतासमेत बाँड्न नसकिरहेको अवस्थामा उनी इकाई सभापति भए । संगठनलाई बलियो बनाउँदै उनी दुईपटक स्ववियु सभापतिका उम्मेदवारसमेत भए ।
रत्नराज्यमै दुई कार्यकाल इकाई सभापति भएका राई चितवनमा भएको नेविसंघको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । राजनीतिसँगै पढाईलाईसमेत निरन्तरता दिएका राई इतिहास विषयमा एमए गरे । २०६३ मा उनले यस विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालबाट पहिलो हुँदै एमए उतीर्ण गरेका थिए ।
विसं २०३५ असार १५ गते खोटाङको याम्खा गाविसमा जन्मिएका राईले पढाईलाई यही थाँती राखेर जिल्ला फर्के । जिल्लामा नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति शुरु गरे । जिल्ला कार्यसमितिका सदस्य र जिल्ला संगठन विभागको प्रमुख भएर काम राजनीतिक काम शुरु भयो । त्यसो त उनी गाउँकै महेन्द्रोदय माविमा इकाई अध्यक्ष भइसकेका थिए । जिल्लामा राजनीतिक सक्रियताकै कारण उनी अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका छन् ।
जनताको काममा लागी पर्ने भएकै कारण ‘लालगढ’ मानिने दिप्रुङ चुईचुम्म गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत निर्वाचित भए उनी । दिप्रुङ चुईचुम्म गाउँपालिका सात गाविस मिलेर बनेको हो । अघिल्ला स्थानीय निर्वाचनमा सातै गाविसमा तत्कालीन नेकपा एमालेको उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । यसपटक उक्त लालगढमा उनले एमालेका उम्मेदवारलाई १,१९२ मतान्ततरमा पराजित गरे । सातमध्ये ४ वडामा कांग्रेसले जित्यो । गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा उनलाई बहुमत प्राप्त छ ।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएको एक वर्ष पुरा भइसकेको छ । यही अवसरमा उनै खोटाङ दिप्रुङ चुईचुम्म गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र राईसँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि नेत्र तामाङले गरेको कुराकानीः
तपाई पढाईमा ‘टियु टपर’, राजधानी छाडेर गाउँको राजनीतिमा लाग्दा पछुतो लाग्दैन ?
म गाउँदेखि नै राजनीतिमा लागेको । जागिर खान र प्रोफेसर बन्न पढेको थिएनँ । युनिभर्सिटी टप गरे पनि मलाई समाजको सेवाको भोक थियो । राजनीतिमा लागेकालाई गाली गर्नेहरु धेरै छन् । राजनीति सुधारका लागि पढेका मान्छे यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ । राजनीति विशुद्ध समाजसेवा हो । गाउँ विकासका लागि पढेका र देश बुझेका मानिस आवश्यक छ ।
गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भईहाल्नु भयो, त्यसैले आत्मविश्वास बढ्यो ?
म यही एक कार्यकाल जितेर समाजसेवा गर्न राजनीतिमा लागेको हैन । मैले अझै पनि राजनीति गर्नुछ । समाजका लागि देशका लागि अझै काम गर्नु छ । पारदर्शी तरिकाले सेवा गर्नुछ । जनताको सेवा गर्न आएको हुँ, म शासन गर्न आएको हैन । त्यसैले वामपन्थीहरुको कब्जामा रहेको यो गाउँका जनताले मेरो साहसलाई पत्याउनुभयो र मलाई चुनेर पठाउनुभयो । जनताको आडभरोसा नै सबैथोक हो ।
गाउँपालिकाका वडामा इन्टरनेट जडान गरिँदै
निर्वाचित भएको त वर्षदिन नाघिसक्यो, घोषणापत्र कतिको सम्झनु हुन्छ ?
घोषणापत्रअनुसार नै काम हुँदैछ । अझ बढी काम गर्नेछु । सबैभन्दा पहिलो भनेको सडक हो । सातै वडामा बाटोको ट्रयाक खोलिएका छन् । बाह्रैमास बाटो सुचारु बनाउन ग्राभेल हुँदैछ । सबैबाटोमा नालीको व्यवस्थापन । बर्खामा पनि गाडी गुड्न थालेको छ रोकेको छैन । हाम्रो समस्या अहिले खोलामा पुल छैन । साप्सु खोलाको पुलको डिपिआर भएको छ । टेन्डर भइसकेको छ ।
वडा नम्बर ४ मा विद्युत पुगेको छैन । यसपटक बाल्छौ भनेर लागीरहेको छ । सञ्चारमा, सात वटै वडा कार्यालयमा इन्टरनेट पुगेको छ । सातै वडामा नमुना विद्यालय पुग्दैछ । कम्प्युटर पढाई शुरु भइसकेको छ ।
पर्यटनको लागि प्याराग्लाईडिङ परीक्षण उडान गरेका छौ । व्यवसायिकरण गर्न लाग्दैछौ । दिप्लुङ छाँगा यहाँको आकर्षण हो । १७६ फिट अग्लो छ । यसको प्रचार र पर्यटनका लागि गएको वर्ष र यस वर्ष गरी ४५ लाख छुटाएको छौ ।
उद्योगमा, प्लाइउड उद्योग खोल्ने तयारीमा लागिसकेका छौ । फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुने भएको छ । कृषिको उर्बर भूमि हो हाम्रो गाउँपालिका । कृषि संकलन केन्द्र बनिसकेको छ । एक मुठा साग पनि बेच्न पाउँछन् किसानले । बजारका लागि गाउँपालिकाले व्यवस्था मिलाएका छौ ।
स्वास्थ्यमा सातै वडामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी छ । ६५ वर्षमाथिकालाई गाउँपालिकाभरी यातायात सुविधा निशुल्क व्यवस्था गरेका छौ । ७० वर्षमाथिकालाई घरमै स्वास्थ्य सेवा गरेका छौ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता दिन शुरु गरिएको छ ।
अहिले करको दर बढेको छ, शिशु जन्मिदाँ दिइने पैसाभन्दा बढी जन्मदर्तामा असुल्ने गरेका छन्, दिप्रुङ चुईचुम्मको अवस्था पनि त्यस्तै हो ?
कर हाम्रै लागि हो । गाउँपालिकाकै विकासकै लागि हो । हाम्रो गाउँपालिकामा कर अत्यन्त्यै कम उठ्छ । हामी उठाएको कर स्पष्टसँग जनतालाई देखाउँदै ती करबाट के के काम हुँदैछ भनी देखाउँछ ।
अर्को कुरा शिशुको जन्मदर्ताका लागि हामी एकसय रुपैयाँ मात्र लिन्छौ । बरु यस्ता शिशुलाई स्वस्थ राख्न हाम्रो गाउँपालिकाले प्रतिमहिना एकहजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । अबको गाउँपालिका स्वस्थ गाउँपालिका हाम्रो अभियान हो । यसका लागि गर्भवती महिलाले चारपटक स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हुनुपर्छ र जन्मदर्ता गरेको हुनुपर्छ । बच्चाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हुनैपर्छ । बच्चालाई दुई वर्षसम्म प्रति महिना एक हजारका दरले एउटै बाआमाका दुई जना बच्चालाई प्रदान गरिने भएको छ । । यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि जन्मेको शिशुलाई शिशु पोषण प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत यो प्रदान गरिनेछ ।
भनेपछि सिंहदरबार गाउँ पुग्यो ?
सिंहदरबार हैन समाजको काम गर्ने अफिस पुगेको छ । सिंहदरबारले त जनताको सेवा गरेकै रहेनछ । सिंहदरबारको शासक पुग्यो भने त्यो गलत हुन्छ । अहिलेसम्म सिंहदरबार भएकै कारणले जनताले सेवा नपाएका रहेछन् । सिंहदरबारमा त शासकले अधिकार पाउने जनताले नपाउने रहेछ ।
अन्त्यमा गाउँपालिकाको नाम कसरी फेरियो, त्यो पनि बताइदिनुस न ।
चुईचुम्म र दिप्रुङ किराती थुम हुन् । चुई चुम्म भनेको थुम थुम रहेछ । दिप्रुङ पनि किराती थुम नै हो । सरकारले पहिले दिप्रुङमात्र राखेको थियो गाउँपालिकाको नाम । दिप्रुङतिर चार थुम छन् । चुईचुम्मतिर तीन थुम । गाउँसभाले सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबैको अस्तित्व रहने गरी दिप्रुङ चुईचुम्म राखेको हो ।
पत्रकार बानियाॅको निधन
फोनिजद्वारा दुई अक्षयकोष स्थापना
वाइडेनको चुनावी जोडीमा कमला छानिइन्